मिरुना भर्सेस सोनिका
इटहरीः समाज जतिजति विकसित हुँदैछ उतिनै विभेद, बलात्कार, यौनजन्य दुव्र्यवहार, अन्याय र अत्याचार शृङ्खला बढ्दै गइरहेको छ । खासगरी नेपाली समाजलाई हेर्ने हो भने सौन्दर्य बलात्कार र यौनजन्य दुव्र्यवहारका घट्नाहरु एकपछि अर्को गर्दै छरपस्ट हुन थालेका छन् । यीनै घट्नाहरुले केही विषयहरूमा गम्भीर बहस गरि निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने भएको छ । जस्तो कि बलात्कारको हदम्याद हुनुपर्छ कि पर्दैन ? गुड टच र ब्याड टच कस्तो कस्तोलाई भन्ने ? आजको यस् ब्लगमा गुड टच र ब्याड टचबारे बहस गर्नेछौ ।
हालैको घटनामा आफूलाई एक युवकले पटकपटक ब्याड टच गरेको भन्दै नायिका मिरुना मगरले हातै उठाइन । नायिकाले हात मात्रै उठाइनन् हालात ती युवकलाई प्रहरी हिरासत सम्मै पुर्याइन् । तब सुरु भयो, धार्मिक र जातीय द्वन्द्व । कारण थियो, दुव्र्यवहार गरेको भनिएका युवा बौद्ध भिक्षु थिए । त्यसपछि नायिकाको विरुद्धमा कयौं नाराहरु लागे, पोस्टर जलाइए र फिल्म बहिष्कार गर्ने सम्मका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु दर्शकहरुले व्यक्त गरे । चौतर्फी रूपमा नायिकाको आलोचना भयो ।
नायिकाको विरुद्धमा सडक तताउने प्रशस्तै महिलाहरु थिए । यहाँसम्म कि नायिकाको नाममा ‘रिप’समेत लेखियो । एकपटक गहिरिएर सोच्नुस् त, ‘आफूलाई असह्ज नभएको भए बौद्वमार्गी भेषमा भएको भिक्षुलाई नायिकाले झापड किन हान्थिन र ?’ तर भिडले नायिकालाई दोषी देखायो । जुन भिड जता लग्यो, त्यतै जान्छ । भिड विवेकहीन हुन्छ । यद्यपि मलाई नायिकावादी नभनियोस् । तर मेरो अन्तर्मनले यस्तै सोच्न बाध्य बनायो ।
यतिबेला नायिकाले लामालाई भाई सम्झिएर माफी दिएको र लामाले गल्ती स्वीकार गरेपछि घट्ना मिलापत्रमा टुंगिएको छ । तर घट्नाको बाछिटा अझै बाकी छ । यसैबीच भिक्षुले भर्खरै एक अभिव्यक्ति दिएका छन्, ‘नायिकाले मेरो करियर बचाइदिनु भन्दै रुन लागेपछि गल्ती स्विकार गरें ।’ यसले गर्दा पनि घट्ना सेलाउन पाएको छैन् । एकाथरीले भिडभाडमा टच हुनु सामान्य कुरा भएको तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले पीडितले ब्याड टच महसुस गरेपछि दुव्र्यवहार नै हुने बताउँदै समाज बाझिएको छ ।
तर महिलाले आफूलाई पुरुषहरुले संवेदनशील अंगमा छुँदा असहज वा भनौं ब्याड महसुस गर्छिन् भने त्यो यौनजन्य दुव्र्यवहार नै हो । जुन तथ्यलाई प्रमाणित गर्न नायिकाले भनेकी छन्, ‘मलाई नियतबस तीनपटकसम्म पछाडेबाट छोएपछि मलाई असहज भयो र झापड हानें ।’
गुड टच र ब्याड टचको बहस उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला यतिबेला एक नृत्यको खुबै चर्चा भइरहेको छ । हिमालयन टेलिभिजनमा प्रशारण हुने ‘डान्सिङ विथ स्टार्स’ को १७ औं एपिसोडमा मोडल सोनिका रोकायाले कोरियाग्राफर दिलिप ओखेडासँग प्रस्तुत गरेको उक्त नृत्यले सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनाएको छ ।
यौन जीवन र यौनिकताबारे खुलेर बहस गर्ने सोनिकाले प्रस्तुत गरेको उक्त नृत्यमा कामुकता र संवेदनशील अंगहरुको छुवाइलाई दर्शलले स्वाद मानेर हेरे । यद्यपि उनका केहि स्टेपहरु तारिफयोग्य थिए, जुन ओझेल परे । नृत्यको क्रममा कोरियोग्राफर ओखेडाले पटकपटक सोनिकाको संवेदनशील अंगमा हात र मुख पुर्याएको भिडियोमा प्रष्ट देखिन्छ । यदि यसलाई नियतबस छुवाइ हो भनेर मान्ने होभने यो ब्याड टचनै हो । अझ धेरैले त यसलाई ‘छाडा’ सम्म भन्न भ्याएका छन् । के उसोभा यसलाई ब्याड टच नभन्ने त ?
कसैले कसैको निजि अंग बिनाअनुमति छुन पाउँदैन । तर मिरुना र सोनिकाको प्रसंगले भने घट्नालाई नै अतिरञ्जित गरिदिन सक्छ । सञ्जालमा यतिबेला भिक्षुको पक्षधरहरुले सोनिकाको नृत्यलाई तुलना गर्दै नायिकालाई गाली गरिरहेको देख्न सकिन्छ । के नृत्यमा ब्याड टच, गुड टचले अर्थ राख्दैन ? राख्छ भने कुनै एक राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट यौन दुव्र्यवहार झल्किने खाल्का सामाग्री किन प्रशारण गरिन्छ ? यस्ता सामाग्रीले पक्कै समाजलाई यौन दुव्र्यवहारलाई बढुवा दिन प्रोत्साहन गर्छ । समाज बाँझिन्छ र, ती नायिकाजस्तै एक पीडितले पीडा सहिरहनुपर्छ ।